शब्बातमा निगरानी क्यामेरा - रब्बी माइकल अव्राहम
शनिबार एक निगरानी क्यामेरा
प्रतिक्रिया > श्रेणी: हलचा > शनिबार एक निगरानी क्यामेरा
के तपाईलाई शनिबार ट्राफिक पछ्याउने क्यामेराको अगाडि, वा ट्राफिकले प्रज्वलित फ्ल्यासलाइटको अगाडिबाट जान निषेध गरिएको छ जस्तो लाग्छ, मलाई फ्ल्यासलाइट खोल्न वा क्यामेरा खोल्नमा कुनै रुचि छैन भनेर मानिन्छ।
मेरो जानकारी अनुसार यसमा कुनै प्रतिबन्ध छैन। र धेरैले पहिले नै यसको सामना गरिसकेका छन् (उदाहरणका लागि Shevet Halevi प्रतिक्रिया र थपमा)। उदाहरणका लागि यहाँ हेर्नुहोस्:
सोही सन्दर्भमा प्रश्न..
प्रणाली बन्द हुँदा अलार्म प्रणालीको भोल्युम डिटेक्टरमा जाँदा के हुन्छ?
प्रणाली बन्द = डिटेक्टरले काम गर्दछ र अलर्टहरू तर प्रणालीले अलार्म बजाउनेछैन किनकि यो स्ट्यान्डबाइ मोडमा छ। डिटेक्टर ताररहित छ र इनपुटको सम्भावना बिना मात्र प्रसारण गर्न सक्छ, त्यसैले यसलाई प्रणाली मार्फत बन्द गर्न सकिँदैन तर ब्याट्री हटाएर मात्र।
के फरक छ? माथिको जस्तै।
मात्र प्रश्न तिखार्नुहोस्।
यसको मतलब यो हो कि डिटेक्टरले काम गर्दछ र प्रत्येक पटक तपाईंले यसलाई पास गर्दा प्रसारण गर्दछ, तर अलार्म प्रणालीले ट्रान्समिटरलाई प्रतिक्रिया गर्दैन।
यो मेरो घरमा स्थापित डिटेक्टर हो र म सैद्धान्तिक रूपमा हरेक शनिबार डिटेक्टरहरू कभर गर्न / ब्याट्री हटाउन सक्छु।
फरक यति हो कि मसँग समस्या समाधान गर्ने विकल्प छ। यो झन्झट आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो।
यदि डिटेक्टर उठ्छ तर केहि पनि प्रसारण गर्दैन भने म चिन्ताको कुनै कारण देख्दिन। मेरो विचारमा यसमा कुनै प्रतिबन्ध छैन । रब्बी रबिनोविट्जले नवीकरण गरे कि जब तपाइँ कार्यको लागि प्रत्यक्ष परिणामहरू देख्नुहुन्न भने यो निषेध गरिएको छैन (शब्बातमा होटलको ढोका खोल्ने कार्डको लागि), र त्यो हो जब त्यहाँ परिणामहरू छन् (ढोका खुल्छ) तर स्थानान्तरणको परिणामहरू देख्नुहुन्न। कार्ड। यो एक नवीनता हो कि म पक्का छैन कि म सहमत छु। तर यहाँ कुनै नतिजाहरू छैनन् (र न केवल तिनीहरूलाई देख्न) त्यसैले म बढ्दो आवश्यकता देख्दिन।
मोशे ५ वर्षअघि जवाफ दिए
मलाई लाग्छ कि तपाईंले घर नहुँदा मात्र डिटेक्टर खोल्नु पर्छ। स्पष्ट रूपमा छैन?
थप 3,089 सदस्यहरू सम्मिलित हुनुहोस्
त्रि-आयामी सीमित निकायहरूमा केन्द्र
'महान्' ले भनेका थिए कि जो प्रबन्धक दिमागमा चल्छ उसले आफ्नो अर्को संसार गुमाउँछ। के यो गम्भीर हो?
सुझाव: अवधारणात्मक विश्लेषण मा एक पुस्तक
चुनावी क्यामेरा चोरी
ब्रह्माण्डीय तर्क र बिग ब्यांग
डा. प्याट्रिसिया मारी मा ट्याग र छलफलहरूमा, वा: के म एपिक्युरियन हुँ? (स्तम्भ ७४)
ए मा 'महान' को जवाफले दिमागमा चल्ने प्रबन्धकले आफ्नो अर्को संसार गुमाउनेछ। के यो गम्भीर हो?
तरवारको मुख मा ब्रह्माण्डीय तर्क र बिग ब्याङ्गको जवाफ
ए' मा सुझावको उत्तर: वैचारिक विश्लेषणमा पुस्तक
उनलाई महान्यायाधिवक्तासँग पनि समस्या छ मा ब्रह्माण्डीय तर्क र बिग ब्याङ्गको जवाफ